Nnwom 136 - Akuapem Twi Contemporary Bible (AKCB)
1Monna Awurade ase na oye.
Nʼadɔe wɔ hɔ daa.
2Monna anyame mu Nyankopɔn no ase.
3Monna awuranom mu Awurade no ase.
4Ɔno nko ara na ɔyɛ anwonwade akɛse.
5Ɔno na ofi ne ntease mu bɔɔ ɔsoro.
6Ɔno na ɔtrɛw asase mu de kataa nsu so.
7Ɔno na ɔbɔɔ akanea akɛse no.
8Ɔbɔɔ owia sɛ enni adekyee so.
Nʼadɔe wɔ hɔ daa;
9Ɔbɔɔ sram ne nsoromma sɛ wonni adesae so no.
10Ɔno na okunkum Misraimfo mmakan,
11na oyii Israelfo fii wɔn mu no.
12Ɔde nsa kɛse ne basa a wateɛ mu.
13Ɔno na ɔpaee Po Kɔkɔɔ no mu no,
14na ɔde Israelfo faa mfimfini no.
15Nanso ɔpraa Farao ne nʼasraafo guu Po Kɔkɔɔ mu no.
16Ɔno na odii ne nkurɔfo anim wɔ sare no so.
17Ɔno na okum ahemfo akɛse no,
18na okum ahemfo akunini no.
19Okum Amorifo hene, Sihon,
20ne Basanhene, Og.
21Na ɔde wɔn nsase maa sɛ agyapade.
22Ɔde maa ne somfo Israel sɛ agyapade.
23Ɔkaee yɛn, yɛn mmerɛwyɛ mu.
24Na ogyee yɛn fii yɛn atamfo nsam.
25Ɔno na ɔma abɔde biara aduan.
26Monna ɔsorosoro Nyankopɔn no ase.
AKCB : Nnwom 136